Nyeinlatt.com: iPhone ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Music videos နှင့် Movies များကိုထည့်ပြီး ကြည့်ချင်ရင်
နည်းပညာ နှင့် အထွေထွေ
iPhone ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Music videos နှင့် Movies များကိုထည့်ပြီး ကြည့်ချင်ရင်
ဒီနေ့တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Music videos နှင့် Movies များကို iPhone ထဲမှာ ထည့်ပြီး ကြည့်ချင်တဲ့သူ အတွက် ဘယ်လိုလုပ် ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ iPhone ထဲကို Movie Files တွေထည့်ဖို့ ပထမဆုံး ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ Movie Files တွေကို MP4 Movie File အဖြစ်ပြောင်းပေး ဖို့လိုပါတယ်။ Movie Files တွေကို MP4 Movie File အဖြစ်ပြောင်းဖို့ အခု ကျနော် အသုံးပြုနေ တဲ့ Total Video Converter ဆိုတဲ့ Software လေးကို အသုံးချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ စိတ်ကြိုက် တခြား video converter တွေကိုလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
(1) Total video converter ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။ Registration အတွက် Register number လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။TVC register number;
Total Video Converter ကို ဖွင့်ပြီး ညာဘက် အောက်ခြေထောင့်မှ About ကိုနိုပ်ပါ။ ပေါ်လာသော box လေးမှ Register ကို နိုပ်ပါ။ အပေါ်မှ အနီရောင်ဖြင့် ရေးထားသော TVC register number အား copy လုပ်ပြီး ပေါ်လာသော box လေးထဲမှ Input of Paste your registration code အောက်မှ အဖြူရောင် box ထဲကို Past လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ Register လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း box လေးပေါ် လာပါ့မယ်။
(2) Total video converter ကို ဖွင့်ပါ။ New Task မှ Import files ကိုရွေးပါ။ box လေးတစ်ခုကျလာ ပါလိမ့် မယ်။ box လေးထဲမှာ မိမိထည့်ချင်သော video file ကို ရွေးပြီး Open ကိုနိုပ်ပေးပါ။
(3) နောက်ထပ် box ကြီးတစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ box ကြီးထဲမှ Apple Video ကိုနိုပ်ပြီး iPhone Mpeg4 ကိုရွေးပါ။
(4) မိမိ ပြောင်းမယ့် video file လေးရဲ့ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Setting မှာ high quality ကိုရွေးပါ။ Video file ကို convert လုပ်ပြီးသွားရင် MP4 video file လေးကိုသိမ်းဖို့ Open ရဲ့ဘေးက button လေးကို နိုပ်ပြီး Output File location ကိုရွေးပေးပါ။ အောက်က ပုံလေးမှာတော့ location ကို Desktop လို့ ရွေးထားပါတယ်။ ပြီးရင် Convert Now ကို နိုပ်လိုက်ပါ။
(5) Converting လုပ်နေပါလ်ိမ့်မယ်။
(6) Convert လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ စောစောက ရွေးခဲ့တဲ့ Output file location မှာ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ MP4 video file လေးကိုတွေ့ရမှာပါ။
ကဲ....MP4 video file လေးတော့ပြောင်းလို ပြီးသွားပြီ။ iPhone ထဲကို ထည့်ရအောင်။
(7) iTunes ကို ဖွင့်ပါ။ MP4 video file တွေကို iTunes ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှ Panel လေထဲက LIBRARY ရဲ့ အောက်မှ Movies ထဲသို့ Drag ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။
(8) iPhone ကို computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ iTunes ရဲ့ ဘယ်ဘက် Panel လေထဲမှ DEVICES ရဲ့အောက် က မိမိ iPhone ကို ရွေးပေးပါ။ ညာဘက်က box ထဲမှ Movies ကိုရွေးပါ။ Sync Movies ကို အမှန် ခြစ်ပေး ပါ။ ပြီးရင် Movies အောက်မှ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ MP4 video file လေးတွေကို အမှန် ခြစ်ပေးပြီး iTunes ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ Apply ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
(9) iTunes/ Library/ Movies ထဲမှ Video တွေအားလုံး iPhone ရဲ့ iPod ဆိုတဲ့ icon လေးအောက်က Videos ထဲကို ၀င်သွားပါ လိမ့်မယ်။
မရှင်းလင်းတာများရှိရင် အောက်မှာရှိတဲ့ comment box လေးထဲမှာ စာရိုက်ပြီး မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် lattnyein@gmail.com သို့ email ပို့ပြီး မေးရင်လည်းရပါတယ်။
မူရင်းရေးသားသူ။ ။ Nyein Latt
Posted by Nyein Latt at 10:40 PM
Aye June 21, 2012 at 1:08 PM
sync လုပ်ရင် iphone ထဲရှိပီးသား တွေကို erase လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ် ညီမက cus ringtone တွေထည့်ထားလို့ ပျက်သွားမှာနှမြောလို့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူး အရင်ဟာတွေမပျက်ပဲ ထပ်ထည့်လို့မရဘူးလား နည်းလမ်းလေးကူပါအုန်း ကျေးဇူး :)
နည်းပညာနှင့်အထွေထွေ (ဒီမှာ HTML code ကိုယူပါ။)
သုတဖွေရှာ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ
(1)Window7မှာ ကွန်ပျူတာကို keyboard မသုံး mouse မသုံးပဲ microphone နဲ့ အိပ်နေရင်း ကွန်ပျူတာကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်
(2)မြန်မာတခြားဖောင့်များမှ ဇော်ဂျီဖောင့် ပြောင်းပုံ...
(3)Forward Letter မလိုချင်သူမျုား နှင့် မေးလ်ထဲတွင်သီးသန့် Label တည်ဆောက်ချင်သူများအတွက် နည်းလမ်း
(4)Create another Disk partition on Window Vista and7without software
(5)How to Install Windows XP on Acer Laptop
(7)Passport ပုံ အမြန်စီနည်း
(8)Why is My Computer Slow?
(9)Remove windows dual boot
(10)MEMORY တိုးပြီးဘာကြောင့် မမြန်တာလည်း
(11)Computer တစ်လုံး ၀ယ်ရင်ဘာတွေသိထားဖို့လိုသလဲ
(12)blue screen errors..
(13)Software မသုံးပဲ ကွန်ပျူတာကိုမိမိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ Auto Shutdown လုပ်ခိုင်းမယ်
(14)Cannot see wireless connection ?????
(15)Open Multiple G-mail Accounts in the same web browser
(16)Open Multiple Google Talk on single computer
(17)G -Talk မှာ မိမိသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Email နာမည်တွေကို ပြောင်းချင်ရင်
(18)Facebook account ကို အသုံးမလို့တော့လို့ ဖျက်ချင်သူများအတွက်
(19)Nyeinlatt.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်လေးကို မိမိ blog မှာ ညွှန်းချင်ရင်
(20)Microsoft Office (2003) (2007) များနှင့် လုပ်ထားတဲ့ Documents တွေကို password ထားချင်ရင်
(21)kiss ဆိုတဲ့ အနမ်းလေး တစ်ခုနဲ့ youtube.com မှ video files တွေကို download လုပ်ချင်ရင်
(22)Window နဲ့ Zawgyi Font ပြသာနာ
(23)Microsoft Office 2007 နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ Files တွေကို PDF File အဖြစ် Save လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Microsoft မှ ထုတ်လိုက်တဲ့ 2007 Microsoft Office Add-in
(24)PDF file ကို Microsoft Office Word documents အဖြစ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ software application လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ခြင်း
(25)Googel Chrome အပေါ်မှာ မြန်မာစာပေါ်အောင်လုပ်နည်း
(1) Creating Apple ID (iTunes Account ) without Credit Card/ Debit Card
(2) iPhone မှာ ကိုယ်ပိုင် Ringtone လေးထည့်ချင်ရင်
(3) iPhone ပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓမ္မတရားတော် များကို ရွက်ဖတ်ပူဇော်၊ နာကြားနိုင်ဖို iDhamma app နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
(4) iPhone ပေါ်ကနေ ဆရာတော်ကြီးများ ဟောကြားထားသော ဗုဒ္ဓ္မတရားတော် တွေကို နားကြားဖို့ Dhamma Stream app နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
(5) iPhone အတွက် English to Myanmar Dictionary လေးဖြစ်တဲ့ Ornagai Free app နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
(6) iPhone မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် MP3 သီချင်းတွထည့်ချင်ရင်
(7) ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို iPhone ထဲမှာ Photo Album လေးအဖြစ် သိမ်းထားချင်ရင်
(8) iPhone ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Music videos နှင့် Movies များကိုထည့်ပြီး ကြည့်ချင်ရင်
(9) Create Apple ID account (iTunes Account) on iPhone, iPad, and iPod touch withoutacredit card
(10) ကုိုယ်နှစ်သက်တဲ့ webpage တွေကုို iPhone ရဲ့ home scream ပေါ်မှာ Application icon လေးအဖြစ် ထားချင်ရင်
(11) အဖြူရောင်သံစဉ် Online Radio ကို iPhone ပေါ်မှာ နားထောင်ချင်ရင်
(12) iPhone ပေါ်မှာ သီချင်းနားဆင်ရင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Auto ပိတ်ခိုင်းချင်ရင်
(13) iPhone ပေါ်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ ပြီးအချင်းချင်း စကားပြောချင်ရင် (To makeaconferamce call on iPhone)
(14) iPhone ပေါ်မှာ မြန်မာစာ ဖတ်ချင်သူတွေအတွက် iBrowser MM app နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
(15) iPhone battery life/ iPhone battery lifespam ကို ကြာကြာအသုံးခံအောင် ဘယ်လိုထိမ်းသိမ်းမလဲ
(16) iPhone ပေါ်မှာ သုံးနေတဲ့ internet connection ကို computer နှင့် တခြား Wi-Fi ပါတဲ့ decives တွေပေါ်မှာ သုံးချင်ရင်
(17) iPhone ပေါ်မှာ Phone bill ကြည့်ဖို့၊ ကိုယ်အသုံးပြုထားတဲ့ Data usage တွေကို စစ်ဆေးဖို့ နဲ့ တခြား mobile services တွေကို အလွယ်တကူ Manage လုပ်နိုင်ဖို့ "My SingTel Account" application နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
(18) iPhone ပေါ်မှာ Phone bill ကြည့်ဖို့၊ ကိုယ်အသုံးပြုထားတဲ့ Data usage တွေကို စစ်ဆေးဖို့ နဲ့ တခြား mobile services တွေကို အလွယ်တကူ Manage လုပ်နိုင်ဖို့ "My M1" application နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
(19) iPhone ( Version iOS 4.3.2 &3) အတွက် အလွယ်ဆုံး Jailbreak လုပ်နည်း
(20) (Updated) iPhone ပေါ်မှာ Zawgyi မြန်မာ Font နှင့် Zawgyi မြန်မာ Keyboard တို့ကို အသုံးပြုနည်း
(21) iPhone ပေါ်မှာ VOA, RFA, BBC ... စတဲ့ ပြည်ပရှိ မြန်မာRadio တွေကို နားဆင်ချင်ရင်
(22) De-authorize all5computer
(23) iPhone ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုခုမှာ ပြသာနာဖြစ်ခဲ့ ရင် ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ အခြေခံပြုပြင်နည်း
(24) Untethered Jailbreak iOS 5.0.1 for iPhone4and 3GS, iPad 1, iPod Touch 4G and 3G
(25) Untethered Jailbreak iOS 5.0.1 for iPhone 4S/ iPad2on Windows/ Mac and Linux
(26) iTunes ထဲမှာ download လုပ်ထားတဲ့ Apps များကို iPhone ထဲသို့ ပြောင်းထည့်နည်း
(27) iPhone ထဲက applications တွေကို iTunes ထဲသို့ ပြောင်းထည့်နည်း
(28) iPhone, iPad နဲ့ iPod Touch တို့အတွက် မြန်မာစာ Keyboard
(29) ကိုယ်ပိုင် Computer မရှိတဲ့သူတွေအတွက် iPhone ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
(30) iPhone version iOS 5.1.1 ရှိပြီးသားသူတွေ အတွက် အလွယ်ကူဆုံး jailbreak လုပ်နည်း
(31) iPhone version iOS 6.0. to 6.1.2 ရှိပြီးသားသူတွေ အတွက် အလွယ်ကူဆုံး jailbreak လုပ်နည်း
(32) Samsung Galaxy Note2LTE GT-N7105 Android 4.3 Root and Myanmar Zawgyi font install
(33) How to Root Galaxy S4 (LTE+) I9506 on Android 4.3 Jelly Bean and install Myanmar Zawgyi font
(33) iOS 7.1, iOS 7.1.1 နဲ့ iOS 7.1.2 တို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံး Jailbreak လုပ်နည်း နှင့် Myanmar Font and Keyboard ထည့်နည်း/a>
ကျန်မာရေး အထွေထွေ အသိပညာ
မြန်မာတို့ အတွက် မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုများ (၁)
မြန်မာတို့ အတွက် မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုများ (၂)
Publish Health in Myanmar
iOS 7.1, iOS 7.1.1 နဲ့ iOS 7.1.2 တို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံး Jailbreak လုပ်နည်း နှင့် Myanmar Font and Keyboard ထည့်နည်း
(Updated) iPhone ပေါ်မှာ Zawgyi မြန်မာ Font နှင့် Zawgyi မြန်မာ Keyboard တို့ကို အသုံးပြုနည်း
How to Root Galaxy S4 (LTE+) I9506 on Android 4.3 Jelly Bean and install Myanmar Zawgyi font
iPhone ပေါ်မှာ မြန်မာစာ ဖတ်ချင်သူတွေအတွက် iBrowser MM app နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
Window နဲ့ Zawgyi Font ပြသာနာ
ဗွီဒီယို၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရအောင်
MP3/ VCD သီချင်းများ နားဆင်ရအောင်
Myanmar All Music Channel
သုတ၊ ရသ စာကြည့်တိုက်
Eleven Media Group ဂျာနယ်
လူထုအသံ online media ဂျာနယ်
World buddhist community မဂ္ဂဇင်း
စကားဝါမြေ online စာကြည့်တိုက်
Myanmar Ebook (2)
ရောက်ခဲ့တဲ့ အထိမ်းအမှတ်လေး တခုခုရေးပေးထားခဲ့ပါ။
nyeinlatt.com. Simple theme. Powered by Blogger.